सुविधासम्पन्न जीवनयापन बाँचेको अमेरिका देख्दा सबैमा आफूसँग केही नहुनुले पश्चात्ताप हुन्छ । नेपालमा रहँदा अभिमान र गफले चलेको जीवनशैली एवं स्वाभिमान त्यतिखेर बबुरो भएको महसुस हुन्छ
३० वैशाख २०७७ मंगलबार
अमेरिकी अनुभवसँग जोडिएका धेरै लेखहरू बेलामौका सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरूमा देख्न/पढ्न पाइन्छ । प्राय: सबैको बुझाइ र भोगाइ आंशिक रूपमा उस्तै खाले हुन्छ । अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाएर पीडा पोखिएको र गाली गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा जीवन कष्टकर छ, काम नगरी खान पाइँदैन, रोबोटजस्तो काम गर्नुपर्छ, भाँडा माझ्नुपर्छ आदि ।
अमेरिकालाई गाली गर्नुमा तुक भए/नभएको सम्बन्धमा ऊप्रतिको बुझाइ कस्तो हो भन्ने चेतनाको दायराले बनाउने धारणा हो ।
म मित्रको सहयोगमा डीभी पाएर केन्टकी राज्यको लेक्सिङ्टनमा जुलाई २०१७ मा सपरिवार आएँ । यहाँ आउने निर्णय गर्नुअघि मैले धेरै राज्यहरूको बसाइ खर्च, जीवनपद्धति, सम्भावना र रोजगारी अवसर कस्तो छ भनेर अध्ययन गरी सोही आधारमा आफ्नो सीप र शिक्षाअनुसार यो राज्य उपयुक्त हुनेछ भनेरै सोचेको थिएँ । आजसम्मको अनुभवमा मेरो निर्णय एकदम सही थियो भन्ने लागेको छ ।
अमेरिकाप्रति बनाइएका आम नकारात्मक विचारहरूजस्तो मेरो अनुभव छैन । हुन त मैले नेपालको क्षेत्रफलभन्दा ६६.८ गुना ठूलो, महाशक्ति र जीवन प्रगतिको अथाह सम्भावना बोकेको देशमा आफ्नो परिस्थितिअनुसार अमेरिकालाई बुझेजति उन्नति गर्न नसकेको हुँला । तर मेरो अमेरिकाप्रतिको स्पष्ट बुझाइ नै छोटो अवधिको उपलब्धि ठान्छु र त्यसैअनुरूप भविष्यमा आफूलाई कसरी फराकिलो पार्ने एवं यहाँका अवसर लिएर जीवन उन्नत बनाउने भनेरै संघर्षरत छु ।
धेरैले विभिन्न लेखहरूमा सतही रूपमा भनेजस्तो त्यस्तो खान नपाउने दु:ख भोग्नु परेको छैन । नपरोस् पनि ।
अत: सामान्य गाउँले पृष्ठभूमि बोकेर सयौँ वर्षअघि दौडिरहेको डिजिटलाइज्ड समाजमा सजिलो गरी जीवनयापन गर्न सकेको छु । म बसेको क्षेत्रमा प्राय: सबै नेपालीहरू राम्ररी नै बसोबास गरेका छन् । धेरै त आफ्नै घर लिएर बसेका छन् । फाट्टफुट्ट पढेर, जागिर खाएर स्थापित हुने पनि छन् । अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको कन्तविजोग देख्नु परेको छैन । भाँडा माझेर गुजारा गरेको देखेकै छैन । भोकै बस्नुपर्ने अवस्था कहिल्यै देखेको छैन ।
अमेरिकामा दु:ख पाउने/नपाउने कुरा जोकोहीले पनि आफ्नो पहिलो बाटो कस्तो छान्ने भन्ने निर्णयमा भर पर्छ । कानुनी रूपमा अमेरिका जाने कि कुनै पनि माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमै जाने । मानव तस्करी या यस्तै कुनै उपाय गरेर अमेरिका छिर्ने । यस्तो निर्णय कसैले पनि सोचेको छ भने स्पष्ट हुनुहोस्, तपाईंका दुर्दिन त्यहीँबाटै सुरु हुनेछन् ।
अमेरिका ठग, गैरकानुनी या उपद्रवका लागि श्राप हो भन्दा फरक नपर्ला । एक पटक लागेको आपराधिक दाग जिन्दगीभर त रहन्छ नै । कुनै पारिवारिक सदस्यलाई पनि अमेरिका प्रवेशमा भिसा अस्वीकृत हुन्छ । हुन त अमेरिका पनि दूधले नुहाएजस्तो सबै कुरामा पवित्र छ भन्ने होइन । अनेक धोखाधडी, गोली हानाहान र ‘किलिङ’ हुने देश हो । अमेरिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त देशको सूचीमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २३ औँ स्थानमा सूचीकृत गरेको छ ।
आफू इमानदार हुने हो भने यी कुकर्मले हामीजस्ता सामान्य आप्रवासीलाई खासै छुँदैन । आजसम्म जति नेपालीहरू यस्ता स्क्यान्डलमा परेका छन्, यसमा केही न केही लापर्वाही भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । केही निर्दोष पनि परेको भए त्यो बेग्लै कुरा हो ।
अवैधािनक रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न गाह्रो छ । बलबुँताले छिरे पनि ऊ कुनै पनि कागजात पाउन योग्य हुँदैन । जस्तो, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र, ग्रीनकार्ड, ड्राइभर लाइसेन्स । यी कागजातबिना कुनै पनि सुविधा लिन पाउँदैन ।
उदाहरणका लागि, बस्ने कोठा, काम, शिक्षा, क्रेडिट कार्ड, जीवन बिमा, स्वास्थ्य सेवा, गाडी आदि । यी कुराहरू नपाएपछि उसले आफन्तकहाँ शरण लिएर, परिवारसँग कोठा भाडाको केही अंश तिरी मिलिजुली बस्नुपर्ने हुन्छ र कर नतिरी नगदमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नगदमा काम गर्ने भनेको ग्यास स्टेसन, पेय पदार्थ बिक्री पसल, सबवे, रेस्टुराँ आदि ।
यसरी जीवनयापन गर्दा दैनिक जीवनका हरेक पाइलामा आफू निर्धो हुनुपर्ने हुन्छ । कोही सहयोगी नहुने हो भने विजोग हुन्छ । लुकीछिपी रहँदा पनि धेरथोर पैसा कमाउनचाहिँ सक्छ, यदि ऊ क्यालिफोर्नियाजस्तो महँगो ठाउँमा बसेको छैन भने ।
यसरी वर्षौं बस्दा न उसको प्रोफाइल बन्छ, न त कुनै सुविधा पाउन योग्य हुन्छ । तर मानिसहरूले भनेजस्तै खानै नपाएर हरिविजोग हुने अवस्था कहिल्यै आउँदैन । सबैले सुविधासम्पन्न जीवनयापन गरेको देशमा आफूसँग केही नहुनुले पश्चात्ताप हुन्छ । नेपालमा रहँदा अभिमान र गफले चलेको जीवनशैली र स्वाभिमान यतिखेर बबुरो भएको महसुस हुन्छ । पीडाबोध हुन्छ । अमेरिकामा दु:ख पाउने यसरी नै हो र पीडा पोख्ने यस्तै अनुभवले हो ।
कानुनी रूपमा बसेको छ भने उसको जीवनमा नसोचेको परिवर्तन हुन्छ । सुविधा लिएर छोटो समयमै सम्पन्न जीवन बनाउन सक्ने देश हो, अमेरिका । नेपालबाट आएको केही समयमै सबै कागजात बनिसकेपछि ठूला कम्पनीहरूमा कम्तीमा साताको ५ दिन काम गर्ने हो भने सुरुआती अवस्था सहज बन्दै जान्छ । केही महिनामै गाडी चढेर काममा जाने, किनमेल गर्न जाने, घुमघाम गर्ने दिनचर्या सुरु हुन्छ । अमेरिकी जीवनशैलीको हावापानीले छुन थाल्छ ।
जहाँसम्म रोबोटजस्तो काम गर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यो साँचो हो । नेपालमा कामचोर भई, मनलाग्दी बाहिर निस्कने, चिया पिउँदै गफ छाँट्ने बानी भएकाहरूलाई सिस्टममा काम अवधिभर खाना र खाजा समयदेखिबाहेक आफूलाई दिएको जिम्मेवारी मिनेट–मिनेटको सदुपयोग गरी दैनिक पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अनि, समय–समयमा दिइने सुझाव र गलत काम गरे बर्खास्तसम्म हुने चेतावनी पनि पाइने भएकाले आम नेपालीहरूलाई काम नपचेको हो । तर काममा सम्मान र समानता महसुस हुन्छ । कटु वचन र गाली सुन्नु पर्दैन ।
अमेरिका यसरी नै बनेको हो । यसरी काम हुन नसक्दा हाम्रो देश पछि परेको रहेछ भन्ने ज्ञान पाइन्छ ।
अमेरिकामा उन्नति गर्ने हिसाबले कसरी आउने त ?
पहिलो बाटो– डीभी ग्रीनकार्ड पाएर आउने । पढ्ने, जीवन उकास्ने र व्यापक सम्भावना बोकेर प्रगति गर्ने । नेपालमा लिएको शैक्षिक दक्षताले यहाँ खासै महत्त्व नपाउने (यदि नपढ्ने हो भने) हुँदा पहिलो बाटो सबभन्दा उत्तम हो । तर कुनै पनि क्षेत्रमा विशेष सीप छ र यहाँ लाइसेन्स लिने हो भने कमाइ माथिल्लो स्तरको हुन्छ ।
दोस्रो– डीभी ग्रीनकार्ड लिएर आउने । सकेसम्म साताको धेरै घन्टा काम गर्ने । पैसा कमाउने । औसत जीवन जिउने ।
तेस्रो– डीभी ग्रीनकार्डमार्फत आउने । सकेसम्म धेरै काम गर्ने र पैसा कमाएर व्यापार/व्यवसाय गर्ने अनि स्वरोजगार जीवन जिउने ।
चौथो– विद्यार्थी भिसामा आउने । यसरी आउनेको केही वर्षको अध्ययन र मिहिनेतपछि जीवन प्रगतिमय हुन्छ । थोरै पढाइको पनि धेरै महत्त्व र मूल्य छ, अमेरिकामा । पढ्नेले राम्रो रोजगारी पाउँछ । अध्ययन अवधिभर सबै सुविधा लिन पाउने प्रावधान छ । पढाइ सकेर ५ वर्षपछि ग्रीनकार्डका लागि आवेदन दिन पाइन्छ । तर सबै आवेदकले ग्रीनकार्ड पाउँछन् भन्ने छैन । यसमा ह्वाइटहाउस प्रशासन र उसले आप्रवासीप्रति अख्तियार गर्ने तात्कालिक रणनीतिले तिनको भिसामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
जस्तो, बाराक ओबामा हुँदाको केही खुकुलो नीति र ट्रम्प प्रशासनको कडाइ । चलाखी गर्नेले रोजगारी (हिब) भिसा लिएर ग्रीनकार्ड प्राप्त गरी स्थायी रूपमा बसोबास गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
अमेरिका आएर पढ्न नसक्ने र कुनै पनि सीपको लाइसेन्स नलिने हो भने औसत जीवन गुजार्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो जीवन पनि सुविधासम्पन्नचाहिँ हुन्छ ।
पाँचौँ– कूटनीतिक र अन्य विशेष भिसामा सामान्य नेपालीहरूको त्यति पहुँच नभए पनि कलाकार, व्यापार या ट्राभल भिसाहरूमा तिनको आउ/जाउ क्रम चलिरहेकै छ ।
कूटनीतिक या विशेष भिसामा यहाँ आएर घुमीफिरेर जाने पनि सुन्दर उपाय हो । तर यस्तो माध्यमबाट आएर छोटो समयमै फर्किंदा अमेरिका र यहाँको विकासलाई गहिराइमा बुझेर ज्ञान हासिल गर्न भने सकिँदैन ।
छैटौँ– अवैधानिक रूपमा आउने र दु:ख पाउने । अब आफैँ निर्णय गर्नुस्, कुन बाटोबाट अमेरिका आउनु हुन्छ र कुन तरिकाबाट भविष्य बनाउनु हुन्छ ?
अमेरिकामा आप्रवासीका लागि भाषा प्रगतिको एउटा ठूलो बाधक हो । भाषामा दक्ष नभएकै कारण धेरै नेपालीहरूले दैनिक जीवनमा सानातिनादेखि ठूला अप्ठेराहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । सानो काम गर्न पनि भाषिक सहयोगी खोज्नैपर्ने हुन्छ । धेरैजसो ठाउँमा त भाषिक सहयोगी पनि सम्पर्कमा राखिएको हुन्छ । तर भाषाकै कारणले कामै गर्न नसकिने परिस्थितिचाहिँ आउँदैन । अंग्रेजी भाषा सुधारका कक्षाहरू प्राय: नि:शुल्क अथवा न्यून शुल्कमा सञ्चालित छन् ।
भाषिक ‘जिनोफोबिया’ (भाषाको कारणले विदेशीसँग लाग्ने डर) नराखी कुनै काम गर्दा आफैँ प्रयास गर्ने बानीले आत्मविश्वास बढाउँछ । परनिर्भर भए आफू सधैँ कमजोर भइन्छ । व्यवधानहरू खेपिरहनुपर्छ ।
अमेरिका यस्तो देश हो, जहाँ कानुनी रूपमा योग्य भए जोकोहीले, जहाँसुकैबाट आएकाले पनि प्रगति गर्न सक्ने अपार सम्भावना छ ।
राज्यले पढ्ने खर्च पनि दिएको छ । छुट छ । आर्थिक सहयोग गर्ने संस्थाहरू पनि छन् । छात्रवृत्ति पनि छ । सक्छौ, केही अंश तिर, सक्दैनौँ भने नतिर । परिस्थिति मिलाऊ । जीवन अर्को खुड्किलोमा चढाऊ र प्रगति गर । स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र उपभोग गर्दै सहज जीवन बाँच । यी सुविधा उपभोग गर्न नचाहे यहाँको सिस्टमअनुसार काम गर । कम या औसत आय भएकाहरूले केटाकेटीको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेकुराको पनि सुुविधा लेऊ, जुन सरकारले दिएको हुन्छ ।